အလိုရှိသည့် စာမျက်နှာ အာဖရိက
နိုင်ဂျီးရီးယားတွင် ရေနံချက်စက်ရုံ ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် လူ ၈၀ ထက်မနည်း သေဆုံး
ဧပွီ ၂၆, ၂၀၂၂ - ၁၂:၀၉ နံနကျ
နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းတွင် တရားမဝင် ရေနံချက်စက်ရုံတစ်ခု၌ ပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်၍ အနည်းဆုံး လူ ၈၀ ဦး သေဆုံးခဲ့ကြောင်း အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေး တာဝန်ရှိသူများက ဧပြီ ၂၄ ရက်တွင် ပြောသည်။
အငြင်းပွား ဧရာမဆည်မှ အီသီယိုးပီးယားက ဓာတ်အားစတင်ထုတ်လုပ်
ဖဖေျောဝါရီ ၂၁, ၂၀၂၂ - ၁၁:၄၇ ညနေ
အိမ်နီးချင်း ဆူဒန်၊ အီဂျစ်တို့နဲ့ ရေအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုရှိနေတဲ့ ဧရာမဆည်ကနေ ပထမဆုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မှုကို အီသီယိုးပီးယားက တနင်္ဂနွေနေ့မှာ စတင်လိုက်ပါတယ်။
သမ္မတက တရားရေးကောင်စီ ဖျက်သိမ်းသည့်အပေါ် တူနီးရှားတရားသူကြီးများ ဆန္ဒပြ
ဖဖေျောဝါရီ ၁၁, ၂၀၂၂ - ၁၁:၅၁ ညနေ
တူနီးရှားနိုင်ငံမှာ တရားသူကြီး ရာချီနဲ့ ထောက်ခံသူတွေက သမ္မတရဲ့ တရားရေး ကောင်စီ ဖျက်သိမ်းတဲ့ ကြေညာချက်ကို ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀ ရက်နေ့က ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။
သမိုင်းတစ်လျှောက် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် အာဖရိကဖလားတွင် ဆီနီဂေါ ဗိုလ်စွဲ
ဖဖေျောဝါရီ ၇, ၂၀၂၂ - ၁၁:၅၁ ညနေ
မနေ့က ကစားခဲ့တဲ့ အာဖရိကဖလား ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ နောက်ဆုံးဗိုလ်လုပွဲမှာ ဆီနီဂေါအသင်းက အီဂျစ်ကို ပင်နယ်တီအဆုံးအဖြတ်နဲ့ အနိုင်ရပြီး ဗိုလ်စွဲသွားခဲ့ပါတယ်။
မော်ရိုကိုမှ ရေတွင်းထဲကျသွားသည့် ၅ နှစ်အရွယ်ကလေးငယ် အသက်မရှင်
ဖဖေျောဝါရီ ၇, ၂၀၂၂ - ၁:၁၄ နံနကျ
ရေတွင်းထဲကျသွားတဲ့ အသက် ၅ နှစ်အရွယ် ရိုင်ယန် အောင်ရမ်ဟာ ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေ မရောက်ခင်မှာပဲ သေဆုံးသွားတယ်လို့ မော်ရိုကိုအစိုးရက ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
မာလီရှိ စစ်အခြေစိုက်စခန်း တိုက်ခိုက်ခံရမှုအတွင်း ပြင်သစ်စစ်သား ၁ ဦး သေဆုံး
ဇနျနဝါရီ ၂၄, ၂၀၂၂ - ၁၁:၅၉ ညနေ
မာလီနိုင်ငံ၊ ဂေါင်မြို့က စစ်တပ်အခြေစိုက်စခန်းတခုကို မော်တာဗုံးသီးနဲ့ တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း ပြင်သစ် စစ်သားတယောက် သေဆုံးတယ်လို့ ပြင်သစ်သမ္မတ အီမန်နျူယယ်မက်ခွန်းရဲ့ရုံးက ဇန်နဝါရီ ၂၃ ရက်မှာ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန် ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
မက်ဒါဂက်စ်ကာ ကမ်းလွန်တွင် ကုန်တင်သင်္ဘော နစ်မြုပ်မှု သေဆုံးသူ ၈၃ ဦးထိရှိလာ
ဒီဇငျဘာ ၂၃, ၂၀၂၁ - ၉:၄၆ ညနေ
မက်ဒါဂက်စ်ကာသမ္မတနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်းကမ်းရိုးတန်းရဲ့ ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာ ကုန်သင်္ဘောတစီး နစ်မြုပ်အပြီး သေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာ ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်အထိ ၈၃ ယောက် ရှိလာပြီလို့ သိရပါတယ်။
ဘာဘာဒို့စ်က ဗြိတိသျှ ဘုရင်မကြီးကို နိုင်ငံ့ ဦးသျှောင် အဖြစ်မှ ဖယ်ရှား
ဒီဇငျဘာ ၁, ၂၀၂၁ - ၄:၁၃ ညနေ
ကာရစ်ဘီယံကျွန်းနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဘာဘာဒို့စ်ဟာ ဗြိတိသျှဘုရင်မကြီးကို နိုင်ငံဦး​သျှောင်အဖြစ်ကနေ ဖယ်ရှားလိုက်ပြီး ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအဖြစ် ရောက်ရှိကြောင်း မနေ့က ကြေငြာလိုက်ပါတယ်။
အီသီယိုးပီးယား ပြည်တွင်းစစ် အရှိန်ပိုမြင့်လာ၊ ၀န်ကြီးချုပ် ကိုယ်တိုင် ထွက်တိုက် မည်ဟုဆို
နိုဝငျဘာ ၂၃, ၂၀၂၁ - ၉:၃၇ ညနေ
နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်နေ့ကစတင်ပြီး စစ်တပ်ကိုဦးဆောင်ကာ ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာကို ထွက်တိုက်မယ်လို့ အီသီယိုးပီးယား ၀န်ကြီးချုပ် အဘီအဟ်မဒ်က ကြေငြာလိုက်ပါတယ်။
ဆူဒန် အာဏာသိမ်းစစ်တပ်က ဝန်ကြီးချုပ်ကို ရာထူးပြန်ပေးမည်
နိုဝငျဘာ ၂၁, ၂၀၂၁ - ၈:၂၉ ညနေ
ဖြုတ်ချခံလိုက်ရတဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် အဘ်ဒယ်လာ ဟမ်ဒေါ့ကို ရာထူးပြန်ပေးပြီး ဖမ်းဆီးထားသူအားလုံးကို လွှတ်ပေးဖို့အတွက် ဆူဒန်အာဏာသိမ်းစစ်ခေါင်းဆောင်က သဘောတူခဲ့တယ်လို့ ညှိနှိုင်းဆွေး​နွေးသူတွေက ပြောပါတယ်။
ဆူဒန် အုပ်ချုပ်ရေး ကောင်စီသစ် ကို လူထောင်သောင်းချီ ဆန္ဒပြ
နိုဝငျဘာ ၁၄, ၂၀၂၁ - ၁၀:၁၅ ညနေ
ဆူဒန်နိုင်ငံမှာ အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသစ်ဖွဲ့စည်းပြီးနောက် နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်က မြို့တော် ခါတွန်မ်နဲ့ တခြားမြို့ အများအပြားက ထောင်သောင်းချီတဲ့ ပြည်သူတွေဟာ လမ်းတွေပေါ် ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
ဟူစိန် (အ.စ) ဘယ်သူလဲ ? အဖွဲ့ မှ တန်ဇန်းနီးယား ရှိ အကူအညီ လိုအပ်နေသူများ ကို အစား အသောက် အထုပ်များ ကူညီ ။ ။ Photos
နိုဝငျဘာ ၆, ၂၀၂၁ - ၁၁:၄၃ ညနေ
အဗ်နာ။ ။ ဟူစိန် (အ.စ) ဘယ်သူလဲ ? အဖွဲ့ မှ တန်ဇန်းနီးယား နိုင်ငံ ရှိ ရွာ ငယ်တစ်ရွာ ၏ အကူ အညီ လိုအပ်သူ မိသားစု ၂၀၀ အားကို အစား အသောက် အထုပ်များ ကူညီ ခဲ့ကြောင်း သိရှိခဲ့ ရပါတယ်။
မီးလာဒ် နဘီ (ဆွ) နှင့် အေမာမ်ဆွာဒစ်က် (အ.စ) ကျင်းပ ၊ ကွန်ဂို ။ ။ Photos
နိုဝငျဘာ ၁, ၂၀၂၁ - ၁၁:၅၅ ညနေ
အဗ်နာ။ ။ ကွန်ဂို နိုင်ငံ တွင် မဂ်ျလစ်စေ အစ္စလာမ်မီ အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ဘက်မှ မီးလာဒ် နဘီ (ဆွ) နှင့် အေမာမ်ဆွာဒစ်က် (အ.စ) အား ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အခမ်းအနား သို့ ကွန်ဂို နှင့် အီရန် နိုင်ငံ ဆိုင်ရာ သံအမတ်ကြီး ဂျဝါဒ် ရှရီအသ်သီ နှင့် ဂျအ်မေအသိုလ်မွတ်စ်သဖွာ (ဆွ) အလ်အာလေမီယဟ် ၏ ကွန်ဂိုနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်တော် H.I ရှအ်ဗန်နီ တို့လည်း တက်ရောက်နေရာ ယူခဲ့ ကြပါတယ်။
ဆူဒန်တွင် အာဏာသိမ်း စစ်တပ်က ဆန္ဒပြ ပြည်သူကို ပစ်ခတ် သတ်ဖြတ်
အောကျတိုဘာ ၂၈, ၂၀၂၁ - ၁၁:၅၁ ညနေ
ဆူဒန်မှာ စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကို စစ်တပ်က ပစ်ခတ်တာကြောင့် အနည်းဆုံး ၇ ဦး သေဆုံးပြီး ၁၄၀ လောက် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။
တူးနီးရှား နိုင်ငံသား ထောင်ပေါင်းများ စွာ မှ သမ္မတ အား ဆန့်ကျင် ဆန္ဒ ပြ ။ ။ photos
အောကျတိုဘာ ၁၁, ၂၀၂၁ - ၁၁:၅၁ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ တူးနီးရှား နိုင်ငံသား ထောင်ပေါင်းများ စွာ မှ မြို့တော် တွင် သမ္မတ ကိုင်စ် စအီးဒ် အား ဆန့်ကျင် ဆန္ဒ ပြ နေသည့် ပုံရိပ်များ ဖြစ်ပါတယ်။
စာပေဆိုင်ရာ နိုဘယ်ဆုကို တန်ဇန်းနီးယားမှ အဘ်ဒွလ်ရာဇတ် ဂူရ်နာ ရရှိ
အောကျတိုဘာ ၈, ၂၀၂၁ - ၁၀:၀၁ ညနေ
၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် စာပေဆိုင်ရာ နိုဘယ်ဆုကို တန်ဇန်းနီးယားနိုင်ငံက စာရေးဆရာ အဘ်ဒွလ်ရာဇတ် ဂူရ်နာက ဆွတ်ခူးရရှိသွားပါတယ်။
အရ်ဗအီးန် အတွက် အမျိုးသမီး များ ၏ သီးသန့် အဇါဒါရီ ကျင်းပ ၊ အိုင်ဗရီကို့စ် နိုင်ငံ ။ ။ photos
အောကျတိုဘာ ၄, ၂၀၂၁ - ၁:၃၆ နံနကျ
အဗ်နာ ။ ။ အာဖရိက တိုက် ရှိ အိုင်ဗရီကို့စ် နိုင်ငံ ၏ မြို့တော် အဘီဂျန် တွင် အရ်ဗအီးန် အတွက် အမျိုးသမီး များ ၏ သီးသန့် အဇါဒါရီ ကျင်းပနေသည့် ပုံရိပ်များ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂီနီတွင် အာဏာသိမ်း စစ်ခေါင်းဆောင်က သမ္မတဖြစ်လာ
အောကျတိုဘာ ၂, ၂၀၂၁ - ၁၁:၅၀ ညနေ
အာဖရိကအလယ်ပိုင်း ဂီနီနိုင်ငံမှာ စက်တင်ဘာ ၅ ရက်နေ့က အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်မှူး မမ်မာဒီ ဒွမ်ဘူယာဟာ မနေ့က အသွင်ကူးပြောင်းရေးအစိုးရရဲ့ သမ္မတအဖြစ် ကျမ်းကျိန်ပါတယ်။
တူနီးရှား၏ ပထမဆုံးအမျိုးသမီး ဝန်ကြီးချုပ် နဂ်ျလာ ရွမ်ဟာနီ ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ?
စကျတငျဘာ ၃၀, ၂၀၂၁ - ၁၁:၅၆ ညနေ
တူနီးရှားသမ္မတ ကာအစ် စအီးဒ်ဟာ မနေ့က နဂ်ျလာ ဘူဒန် ရွမ်ဟာနီဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးကို ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ် ခန့်အပ်ပြီး အစိုးသစ်ဖွဲ့ဖို့ တာဝန်ပေးလိုက်ပါတယ်။
နိုက်ဂျီးရီးယား တွင် ခရစ်ယာန်ပြည်သူ့ စစ်အဖွဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အရပ်သား ၂၀ ကျော် သေဆုံး
စကျတငျဘာ ၂၄, ၂၀၂၁ - ၁၁:၅၉ ညနေ
နိုက်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းမှာ စနေနေ့က မွတ်စလင် ၉၀ ပါတဲ့ ခရီးသွားတွေကို ခရစ်ယာန် ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့က ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့် အနည်းဆုံး ၂၂ ဦး သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ေေေ
၉/၁၁ တိုက်ခိုက်မှု ကိစ္စ ထိပ်တန်း လျှို့ဝှက်ဖိုင်များကို အမေရိကန် အစိုးရက ပြည်သူထံ ချပြမည်
စကျတငျဘာ ၄, ၂၀၂၁ - ၁၁:၃၂ ညနေ
၂၀၀၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၁ တိုက်ခိုက်မှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ လျှို့ဝှက်ဖိုင်တွေကို သုံးသပ်ကာအများပြည်သူထံ ချပြဖို့ အမေရိကန်သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်က တရားရေးဌာနကို မနေ့မှာ အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အာရဘီ စကားပြော ပထမဆုံး သူနာပြု စက်ရုပ် ကို အီဂျစ် တက္ကသိုလ် တီထွင်
ဩဂုတျ ၁၃, ၂၀၂၁ - ၁၁:၅၅ ညနေ
အီဂျစ်နိုင်ငံ ကိုင်ရိုင်မြို့က Ain Shams တက္ကသိုလ်ဟာ အာရစကားပြောတဲ့ ပထမဆုံး သူနာပြုစက်ရုပ်တစ်ခုကို တီထွင်လိုက်ပါတယ်။
အာဏာရှင် ဟောင်းကို ICC ပို့ရန် ဆူဒန်က ခြေလှမ်း စပြင်
ဩဂုတျ ၄, ၂၀၂၁ - ၁၁:၄၉ ညနေ
နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်ခုံရုံး (ICC) ရဲ့ အုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ ရောမကြေငြာစာတမ်း (Rome Statute) ကို လက်မှတ်ထိုးဖို့ ဆူဒန်အစိုးရအဖွဲ့က မဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ဒါဟာ အာဏာရှင်ဟောင်း အိုမာ အလ်-ဘရှီးကို လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှုနဲ့ တရားစွဲနိုင်ရေး ပထမခြေလှမ်းလည်း​ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ဂျီးရီးယား လူငယ်များ မှ ရှိက်္ခ ဇက်ဇာကီ ကို လွှတ်ပေးရန် ဆန္ဒပြ တောင်းဆို ။ ။ photos
ဇူလိုငျ ၁၄, ၂၀၂၁ - ၁၁:၅၈ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ နိုင်ဂျီးရီးယား လူငယ်များ မှ ကာဒူနာ မြို့ တွင် နိုင်ဂျီးရီးယား အစ္စလာမ်မစ် လှုပ်ရှား မှု ၏ခေါင်းဆောင် ရှိက်္ခ ဇက်ဇာကီ ကို လွှတ်ပေးရန် ဆန္ဒပြ တောင်းဆို ကြပါတယ်။
နိုင်ဂျီးရီးယား အစ္စလာမ့် လှုပ်ရှား မှု အဖွဲ့ ၏ လူငယ် လူရွယ် များ ညီလာခံ ကျင်းပ ၊ ဗူသီးစ်ကာမ် ။ ။ photos
ဇူလိုငျ ၁၃, ၂၀၂၁ - ၁၀:၂၆ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ နိုင်ဂျီးရီးယား နိုင်ငံ ဗူသီးစ်ကာမ် မြို့ တွင် အစ္စလာမ့် လှုပ်ရှား မှု အဖွဲ့ ၏ လူငယ် လူရွယ် များ ညီလာခံ ကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ညီလာခံ ၏ ပုံရိပ် အချို့ များ ဖြစ်ပါတယ်။
ရှိက်္ခ ဇက်ဇာကီ အားလွတ်ပေးရန် နိုင်ဂျီးရီးယား မြို့တော် တွင် ဆန္ဒပြ ။ ။ photos
ဇူလိုငျ ၅, ၂၀၂၁ - ၁၁:၅၉ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ နိုင်ဂျီးရီးယား အစ္စလာမ်မီ လှုပ်ရှားမှု ၏ ခေါင်းဆောင် ရှိက်္ခ ဇက်ဇာကီ ၏ ဘက်တော်သားများ မှ ရှိက်္ခ ဇက်ဇာကီ အားလွတ်ပေးရန် နိုင်ဂျီးရီးယား မြို့တော် အာဘူဂျာ တွင် ဆန္ဒပြ တောင်းဆိုနေသည့် ပုံရိပ်များ ဖြစ်ပါတယ်။
မြေထဲ ပင်လယ် တွင် အီဂျစ်က ရေတပ် စခန်း တစ်ခု ဖွင့်လှစ်
ဇူလိုငျ ၅, ၂၀၂၁ - ၁၀:၁၇ ညနေ
မြေထဲပင်လယ်က အရေးပါတဲ့ ရေတပ်စခန်းတစ်ခုကို အီဂျစ်က မနေ့မှာ ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။
ဆူဒန်ပြည်သူများ မှ စားဝတ်နေရေး အကြပ်အတည်း နှင့် ရင်ဆိုင်ရ၍ သပိတ်မှောက် ဆန္ဒပြ ။ ။ photos
ဇူလိုငျ ၁, ၂၀၂၁ - ၆:၁၅ ညနေ
အဗ်နာ ။ ။ ဆူဒန်ပြည်သူများ မှ စားဝတ်နေရေး အကြပ်အတည်း နှင့် ရင်ဆိုင်ရ၍ ဇွန်လ ၃၀ရက်နေ့ ၂၀၂၁ခုနှစ် တွင် သပိတ်မှောက် ဆန္ဒပြ မှုများ ကို ပြုခဲ့ပါတယ်။ သမ္မတ အိမ်တော် အထိ တက်ရောက်ဆန္ဒပြရန် ဖြစ်သော်လည်း ဆူဒန် ရဲများ မှ မျက်ရည်ယို ဗုံးများ သုံး၍ တားဆီးခဲ့ကြပါတယ်။
နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ပြည်တွင်း စစ်အတွက် အပစ် ရပ်ကြောင်း အီသီယိုးပီးယား ကြေငြာ
ဇှနျ ၂၉, ၂၀၂၁ - ၈:၄၆ ညနေ
နိုင်ငံမြောက်ပိုင်း တီဂရေးဒေသမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ စစ်ပွဲမှာ တစ်ဖက်သတ် အပစ်ရပ်ကြောင်း အီသီယိုးပီးယားအစိုးရက ကြေငြာလိုက်ပါတယ်။
ဆီယာရာလီယွန် နိုင်ငံသား ရှိက်္ခ အဲဟ်မဒ် သီဂျန်ဆီလာ အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် အမိန့်ခံယူ
ဇှနျ ၂၇, ၂၀၂၁ - ၁:၂၅ ညနေ
ဆီယာရာလီယွန် နိုင်ငံသား ၊မဂ်ျမယေ ဂျဟာနီ အဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) ၏ အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦး ဖြစ်သူ ရှိက်္ခ အဲဟ်မဒ် သီဂျန်ဆီလာ သည် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ် အမိန့်ခံယူ သွားကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ မရ်ဟွန်မ်ရှိက်္ခ သည် မဇ်ဟဗ်ဗေအဲဟ်လေ့ဘိုက်(သ) (အ.စ) (ရှီအာ မဇ်ဟဗ်) ၏ သာသနာပြု ဆရာ ၊ အာဖရိက တိုက်၏ ထူးချွန် သည့် အာလင်မ်တစ်ပါး ဖြစ်ပြီး ၊ ဆီယာရာလီယွန် နိုင်ငံ ရှိ ဗလီကြီး ဖြစ်သည့် ဖရီတောင်န် စင်တာ ဗလီ ၏ ဂျူမုအဟ် နမာဇ် နှင့်နေ့စဉ် နမာဇ် ၏ ရှေ့ဆောင် ဆရာလည်း ဖြစ်ပါ တယ်။